Blackjack Strategy: Watch ma ọ bụ Guzosie? - cheapinternetsecuritysoftware.com
Blackjack bụ otun’ime egwuregwu cha cha ndị kasị ewu ewu d e gburugburu na anyị niile nwere oge ochie – ị kụrụ ma ọ bụ ị kwụrụ?
Kpọ oku ahụ buru ibu nwere ike iwe obere oge, mana websiten’enyemaka nke atụmatụ blackjack, ị nwere ike belata nke ahụ ma melite ohere ịga nke ọma.
N’ime akwụkwọ ntuziaka a t cha cha charan’ịntanetị, anyị lebara anya d e atụmatụ dị iche iche gburugburu, ebe ị nwekwara ike ile anya etu anyị si egwu ndu ndu ndu blackjack.
Mgbe kụrụ ma ọ bụ kwụrụ t blackjack?
Mgbe ị na-egwu blackjack enwere nhọrọ abụọ – ịkụ ma ọ bụ iguzo.
Iti ihe bu ntughari aka nke ndi egwuregwu nyere onye na ere ahia ka o rio kaadi ozo ma enwere ike igosi yan’udi okwu ma obu website Id igbanwe okpokoro.
Iguzo bu ijide onu ogugu gi ma kwusi oge gi. Nwere ike ime nke a websiten’ikwe aka gị na ntanetị.
Ma ị ga-akụ ma ọ bụ kwụrụ mgbe niile dabere na aka ndị na-ere ahịa nke blackjack.
Otu n’ime ọnọdụ kachasị njọ bụ mgbe onye na-ere ahịa nwere egwuregwu. N’okwu a ị kwesịrị ịnwa ịnwe ezigbo aka nke 17 ma ọ bụ karịa dị ka onye na-ere ahịa nwere ike ịnwe aka dị ike na-eche na ha nwere nnukwu ohere ịkụ kaadị 10-uru (10, Jack, Queen, King).
Ọ bụrụ na kaadị ndị na-ere ahịa bụ 10-uru-kaadị, ị ka chọrọ aka dị ike. Ọ kachasị mma ịkụ aka mgbe ijide aka 10 ma ọ bụ 12-16, ma kwụrụ na ihe ọ bụla 17 ma ọ bụ karịa. Otu genius na-enye gi ezigbo ohere nke imepụta 21 na otiti.
Mgbe onye na-ere ahịa nwere kaadị asaa, asatọ ma ọ bụ itoolu ọ gaghị ekwe ha omume ịme blackjack, yabụ ohere gị na-abawanye. Agbanyeghị, ha ka nwere ike ị nweta aka dị mma karịa 17 ma ọ bụ karịa yabụ ị ga-achọ ọzọ aka dị ike iji sọọ mpi. Mgbe ijide itoolu ma ọ bụ ihe na-erughị ma ọ bụ 12-16 ọ kachasị mma ịkụ, mana kwụrụ d e 17 ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na kaadị ndị na-ere ahịa dị anọ, ise ma ọ bụ isii ọ dị mkpa ka ị ghara imebi. Ọ bụ omume a na-ahụkarị iti asatọ ma ọ bụ obere, mana guzoro n’ihe ọ bụla 12 ma ọ bụ karịa.
Mgbe onye na-ere ahia nwere atọ, ị ga-akụ ihe ọ bụla asatọ ma ọ bụn’okpuru d e 12, mgbe ị na-eguzo na ihe ọ bụla 13 ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ahụ nwere ihe abụọ ọ kachasị mma ịkụ d e itoolu ma ọ bụ obere ma kwụrụ na ihe ọ bụla 13 ma ọ bụ karịa.
Mgbe okpukpu abụọ ma ọ bụ kewaa t blackjack?
Ugboro abụọ na-ezo aka na ọkpụkpọ okpukpu abụọ nzọ mgbe ị hụrụ kaadị mbụ gị. N’elu okpukpu abụọ, a ga-adọta otu kaadị ọzọ.
N’ozuzu, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya ịbawanye okpukpu abụọ mgbe uru aka gị dị na 10 ma ọ bụ 11. Nke a bụn’ihi na ị nwere ohere 30.7percent nke ịpịa kaadị 10 ọzọ uru ma ya mere ịme elu.
Ọ bụrụ na ejiri kaadị abụọ gị rụọ ọrụ abụọ, enyere gị ohere ịkewaa yana ị ga-egosiputa nke a ozugbo enweghị ike ịme mkpebi ahụ emesịa.
Ọ bụrụn’ịhọrọ kewaa, a ga-ekewa kaadị gị ka ọ bụrụ aka abụọ ka ị dakọtara nzọ mbụ na nke abụọ, nke pụtara d e ị nwere ohere ị ga-eji okpukpu abụọ merie gị, yana nke ọzọ, ọghọm gị.
Na ntanetị na ndụ blackjack ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịwaa ma ọ bụrụ na ị nwere ụzọ abụọ ma ọ bụ asatọ. Ihe kpatara nke a bụn’ihi t e nwere ọtụtụ kaadị 10-uru karịa ihe ọ bụla ọzọ na oche ahụ na ọnụ ọgụgụ enwere ezigbo ohere ịkụtu opekata mpe 21 mgbe ị kewara aces.
Ọzọkwa, aka abụọ nke asatọ dị mfe igwu egwu karịa otu aka nke 16, ebe ị nwere obere ohere ịnweta mmeri.
Mgbe emechara itoolu ọnụ ọgụgụ na-agwa gị d e ọ kachasị mma ịkewaa ọ bụrụhaala na onye na-ere ahịa nwere mmadụ abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asatọ ma ọ bụ itoolu. Agbanyeghị, ọ kachasị mma iguzo ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa nwere asaa, 10 ma ọ bụ ace.
Ọ bụrụ na ị nwere ụzọ isii na onye na-ere ahịa nwere kaadịn’etiti abụọ d e isii, nhọrọ kachasị mma bụ ịkewaa. Mgbe ị nwere ụzọ asaa na onye na-ere ahịa nwere kaadịn’etiti abụọ d e asaa ọ kachasị mma ịwaa.
Maka ụzọ anọ mgbe onye na-ere ahịa nwere ise ma ọ bụ isii, ị ga-ekewa, manan’ọnọdụ ọ bụla ọ kachasị mma iji kaadị ọzọ.
Maka ụzọ abụọ ma ọ bụ atọ, gbawara mgbe onye na-ere ahịa nwere kaadịn’etiti abụọ na asaa, mana ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ kacha mma ịkụ.
Mgbe ị nwere ụzọ anọ na onye na-ere ahịa nwere ise ma ọ bụ isii mgbe ahụ ọ kacha mma ka ị kewaa.
Nhazi usoro Blackjack
Iji ụfọdụ usoro aghụghọ blackjack nwere ike inyere gị aka rụọ ọrụ mgbe ọ kụrụ ịkụ ma ọ bụ kwụrụ.
Chaatị dị n’okpuru na-adabere n’eziokwu bụ na nhọrọ ịnyefe adịghị.
Kọlụm aka ekpe nke eserese ahụ bụ ebe ị ga – ahụ ma onye na – ere ahịa, ebe akụkụ ndị ọzọ na – egosi ma ị ga – akụ ma ọ bụ guzoro dabere t ma ejirila gị.
Ihe nhiehie kacha elu nke blackjack
Mgbe ị gbanye egwuregwu ahụ gaan’ụdị ya kachasị mfe ị nwere ike iche na ọ dị mfe – naanị ihe ị ga – eme bụ ijiden’aka na ị ruru 21.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka ị mata ụdị mmejọ ị ga-ezere, nke a bụ ụfọdụ n’ime ndị nkịtị ị ga-ezere.
‘Szọ nzọ kacha nta nke tebụl
Tupu ịmalite, ọ kachasị mma iji chebara nzọ kacha nta na tebụl anya ma lee anya maka osisi kachasị dị ala ị nwere ike ịchọta iji bulie ngosi gị d e blackjack, kamakwa ịmachi ihe ọghọm ọ bụla ị na-amụn’egwuregwu ahụ.
Mara akara aka gi
N’adịghị ka ị na-ahụ na ụfọdụ ihe nkiri na ihe ngosi TV ị nweghị ike ịgwa onye na-ere ahịa’kụrụ m’ ma ọ bụ’Anọ m’.
Iji akara na-egbochi nghọtahie ọ bụla, a pụkwara iji un mee ihe maka nyocha ọ bụrụ d e esemokwu ọ bụla.
Ndị a bụ akara ịchọrọ ịma:
Iji kụọ – kpụọ okpokoro na mkpịsị aka gị iji guzo – fegharịa aka gị na kaadị gị. Iji gbadaa ala – Wepụ self service gị ọzọ (Ọ nwere ike ọ bụghị karịa akara mbụ gị) miniature gbanye akara No.1n’azụ kaadị gị. Iji kewaa – Kpọtụrụ egwuregwu gị na mbụ miniature jiri mkpịsị aka gị abụọ rụọ akara V.
Uru nke Ace
Ace nwere ụkpụrụ abụọ – otu d e 11, yabụ ị ga-ewere nke ahụ mgbe ị na-akụ ma ọ bụ guzoro.
Ọ dị gị ka ị dịla njikere ịnwale blackjack? Gaba anyị blackjack ndụ blackjack tebụl. Bido igwu egwu na otutu egwuregwu ndi ozo di egwu tinyere oghere na slingo na Grosvenor Casino.
Maka ndị na-ahọrọ omume nke ịkụ nzọ egwuregwu, anyị na-enye nsogbu kachasị mma mgbe a bịara na bọọlụ bọọlụ, ịgba ọsọ ịnyịnya na ọtụtụ ndị ọzọ. Gaa na ibe egwuregwu anyị maka nkọwa ndị ọzọ gbasara nsogbu ndị kachasị ọhụrụ.
Tags:Blackjack bụ Guzosie ọ Strategy
Họrọ Casinolọ Ntaneti Kasị Mma na Nzọụkwụ Ise Dị Mfe
Dika onye biara ohuru, ikwurita okwu banyere ntaneti cha cha …